ANTANANARIVO RENIVOHITRA Hasiana jiro avokoa ny andrin-jiro rehetra
Manohy hatrany ny fanazavana ny tanànan'Antananarivo ny JIRAMA, izay fiaraha-miasany amin'ny fiadidiana ny Repoblika.
Nisy ny zoma alina teo ny fidinana ifotony nijery ny fiovana teny amin'ny araben'ny fahaleovantena sy ny manodidina, notarihan'ny filohan'ny filankevi-pitantanan'ny orinasa JIRAMA Solo Andriamanampisoa, notronin'ny minisitry ny angovo sy ny akoranafo Christian Ramarolahy.Tanjona hoy ny minisitra ny hanitatra ny fanomezana hazavana manerana ny elakela-trano rehetra eto an-drenivohitra. Nisy ny tafa fohy nifanaovan'ireto delegasiona ireto tamin'ny ben'ny tananan'Antananarivo Naina Andriantsitohaina. Tsy hijanona eto Antananarivo ihany ny tetikasa fa hiitatra manerana ny Nosy ka afaka herinandro dia ny lalam-pirenena fahafito no hotsidihan'ny minisitra mpiahy ny JIRAMA. Anisan'ny vinan'ity farany ny hamerina indray ny fiainana an-kalalahana amin'ny alina, tsy sembanan'ny haizina sy ny tsy fandriampahalemana. Efa hita taratra izany nandritra ny fandalovan'ny delegasiona teny amin'ny Petite Vitesse sy ny fifampiresahana tamin'ireo mpivarotra hanimasaka. Ireto farany izay nilaza fa afaka manao ny asany mandra-maraina hatramin'ny nanazavana ny arabe manodidina. Nanomboka ny 21 desambra lasa teo dia jiro miisa 443 no napetraka teto an-drenivohitra ka ireny karazana jiro LED ireny ny 341 ary mandeha amin'ny herin'ny masoandro kosa ny 102.